Lammaanayaasha ciday ku kulmaan dhibaatooyin isgaarsiinta jidka, haddii ay cusub shukaansi ama wada dabaal labaatankii sano. kiista Kuwani waa adag tahay in ay wadaan oo u baahan dadaal miyir labada hawlgalayaasha. Xasuusta talooyinka soo socda tijaabin doonaa waxtar leh in kuwa khilaaf danbeyn:
1. Iska ilaali daaweynta aamusnaan: Dumarka iyo ragga labaduba dambi ah xeeladahaas yihiin, waana cajiib ah khatar iyo burbur. Xiridda hoos waxaa muhiimad baxay xiro lammaanahaaga, iyo in aan waxtar u leh wax ka qabashada arrimaha dhabta ah ee gacanta. Sida adag yahay sida laga yaabaa in ay u muuqato, isticmaalaan erayo aad u muujiso dareenkaada, oo ha baqina, si aad u hesho gaar ah. Xusuusnow, qofka saxda ah loo shaqo tagin kula on dhibaatooyinkoodii xiriir, ma isticmaali dareenkaaga sida rasaas aad ka dhanka ah.
2. Ha ka Yeelina u fikradaha: Similar in ka aamusnaanta, fikradaha waa tusaale kale oo ka soo tagay opinion lammaanahaaga, waana si fudud ma suurad wanaagsan oo in qof ka mid ah. Waxaad u qaadan kartaa in uu jawaab gaaban macnaheedu waxa uu lumay daneyntii, laakiin waxa uu kaliya laga yaabaa in ay leeyihiin wax badan oo ka socda shaqada. Haddii aadan codsan iyo tiirsan halkii aad imagination, aadan helaan runta, iyo ilaa xad waxa suurto gala naftaada aad ka taagay tusaale muran weyn oo in dhamaadka.
3. Dabeecadaha wanaagsan hambalyeey: Haddii aad sida lamaanahaaga isleedahay ma aad gacalo badan ka hor inta, isku day in aad u keeneen hab complimentary dhex jeedin. "Waxaan run ahaantii jeclahay hab aad,"Iyo, "Waxaan ka maqnaan fariimaha qoraalka aroortii hore,"Labaduba waa tusaalayaal aan dawliga ahayn halis ah dhiiri falalka aad dooni. Sidaas, aad ka hesho dhibic guud ahaan wax kasta oo afka accusatory.
4. Inay leeyihiin dareenkaaga: Ragga iyo haweenku waa labada dareenka, laakiin waxa ay u muuqdaan in ay muujiyaan dareenkooda siyaabo ka duwan kuwa. Qof dumar ah oo u qayshan laga yaabaa in, iyo nin qaac laga yaabaa in. Labaduba waa jawaabaha dareenka sax ah, iyo labada waxaa iska leh qofka iyaga dareensan. Halkii sheegaya lammaanahaaga, "Aad sameeyey aad dareento doqonimo,"Taas oo ah hadal accusatory, sharxi dareenkaaga qarsan ee doon ku leeyihiin, iyo sharaxaad.
Tusaale ahaan, "Waxaan dareemay in kashifay aad ka yeellay kaftan timo cad la`yihiin" waa yar dood badan, "Aad mar walba i dareento doqonimo ah." War saxaafadeedka ayaa marka hore sidoo kale siinayaa fursad aad nolosha la wadaagto si uu naftiisa u sharax oo daaya garan isha dhabta ah ee arrinta.
5. Joog wanaagsan: Tani waa toughie ah, Waan ogahay! Waa si sahlan si aad u hesho cadhooday ama wax aad macnaheedu ma. Ma aad ugu wanaagsan inuu sii joogo wanaagsan oo camal xagga xalinta caafimaad arrinta. Sure, wax u socdaan in ay qarxiyaan mararka qaarkood. Taasi waa qayb caadi ah oo laba qof wada wadaago noloshooda. Just xusuusan inuu sii joogo xusuusnaan sababaha aad tahay wada in meesha ugu horeysa, iyo geliyey diiradda on dayactirka bond in.
Top US Cities in ay tahay mid
Iyadoo emails joogto ah, ogeysiisyada, iyo Facebook ah farriimaha ku saabsan xiriirka cusub, guurka, iyo uurarka, waxa ay u muuqataa sida haddii qof walba uu leeyahay ...